Ọ dị ezigbo mkpa n'ihi na ụfọdụ ọrụ iji captions na ndepụta okwu na-eme ka n'aka na video na a na-ele na-abụghị nanị ghọtara ma ọ na-enwe na nke kacha mma n'ụzọ. Iji mee ka n'aka na arụpụta ihe kasị mma na-nweela na nke a na Windows Media Player nwekwara agbakwunyere arụmọrụ nke a pụrụ iji mee ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi results na-ọkaibe na ndị kasị mma mgbe ọ na na-abịa na-agbakwunye mpụga .srt ndọtị faịlụ ka ọkpụkpọ. A nkuzi bụ ihe niile banyere yiri ụzọ na ụzọ na nke a.
Part 1: Olee agbanye / kwụsịrị ndepụta okwu
Part 2: Olee otú Tinye ndepụta okwu na Windows Media Player
Nkebi nke 3: Gosi captions ma ọ bụ ndepụta okwu na Windows Media Player ukara ndu
Nkebi nke 4: Windows Media Player agaghị gbanyụọ ndepụta okwu ??
The yiri usoro bụghị nanị mfe na mfe ma ọ na-eme ka n'aka na onye ọrụ na-akawanye-arụ ọrụ mere n'ime oge ọ bụla ma ọlị. Ọ bụ n'ihi na otu ihe ahụ mere na usoro nke e kọwara ebe a abụghị nanị mfe ma n'ụzọ kwụ ọtọ ma ọ na-eme ka n'aka na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma n'ihi n'ime kacha nta na o kwere omume oge. Ọ bụ ya mere gwara iji jide n'aka na nzọụkwụ na-n'ihu ebe a na-soro na otu iji na onye ọrụ kwesịrị mgbe ite egwú ọ bụla n'ime ha na-eme ka n'aka na nsonaazụ kacha mma e enweta na nke kacha mma n'ụzọ.
Ọ na-gwara iji jide n'aka na onye ọrụ kwesịkwara ịgbalị usoro a gafee otutu ngwaọrụ iji hụ na-arụpụta na-na akara na ihe a chọrọ onye ọrụ na onye kasị mma na e imezu na nke a. Ọ na-gwara iji jide n'aka na onye ọrụ kwesịkwara iji otu usoro iji jide n'aka na ndepụta okwu na-agbanyụrịrị nakwa dị ka ma ụzọ ndị otu na-ekwe ka onye ọrụ na-eso otu ụzọ na nke a na-eme ka n'aka na needful nwere e mere. Na-esonụ bụ nzọụkwụ site nzọụkwụ ndu na kwesịrị ime ka n'aka na onye ọrụ mgbe dara n'ime nsogbu mgbe ọ na-abịa mbịne ndepụta okwu ma ọ bụ gbanyụọ. Na akụkụ ikpeazụ nke ndị nkuzi ga-ahụ na onye ọrụ na-akawanye ihe ọmụma banyere agbakwunye ndepụta okwu na videos nakwa iji jide n'aka na arụpụta ihe kasị mma na e nwetara na nke a dị ka mma.
1.The onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ọbá akwụkwọ echiche nke Windows Media Player na meghere iji malite usoro:
2.In nke abụọ strep onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na cursor na-dọkpụụrụ n'elu na site a nri pịa menu na-ekpughe na ebe-chọrọ nhọrọ họrọ dị ka e gosiri na foto n'okpuru:
3.Using otu ụzọ na usoro onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndepụta okwu na-agbanyụrịrị nakwa na nke a kwa na-ekwubi usoro na zuru na ọ nwere ike hụrụ na usoro bụghị nanị dị mfe ma ọ dịkwa nnọọ mfe na-eso na site na nke a nkuzi ọbụna a layman nwere ike igosi na nzọụkwụ na ala na afọ ojuju:
The yiri usoro ọzọ bụ nnọọ mfe ma dị mfe na-eso na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na nzọụkwụ na-kwuru na ntuziaka n'okpuru na-soro na ụzọ isi pụọ bụrụ na nke mbụ usoro adịghị arụ ọrụ na-kwukwara na-eme ka n'aka na ndị nile ụzọ na-ekpughe enweghị ihe ọ bụla nke na onye ọrụ ọkọkpọhi kasị mma na ọkaibe results na nke a. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na ọtụtụ ndị elu eji ọrụ nwekwara amaghị nke usoro na a na-ekwu ebe a ad ya mere ọ dị a ere ihe niile na-ndị ọrụ chọrọ ka ịgbakwunye ndepụta okwu ka video a na-egwuri na windows media ọkpụkpọ.
1.The onye ọrụ kwesịrị ka jide n'aka na URL http://www.free-codecs.com/htm2php.php?f=directvobsub_download a gara iji jide n'aka na Direct Vob Sub ebudatara na arụnyere. Ọ bụ-nyeere otu ugboro nbudata e dechara:
2.Now onye ọrụ dị mfe mkpa na-eme ka n'aka na sobtaitel faịlụ na mbụ video faịlụ na-nọ na otu nchekwa n'okpuru otu aha. Aha nke sobtaitel faịlụ ga kwụsị na .srt ndọtị:
3.Once video na-egwuri ruru ka echichi na e mere ka ndepụta okwu a ga-emere n'okpuru nkiri ma ọ bụ video a na-egwuri. Ọ bụrụ na ka onye ọrụ odụk mbipụta na nsogbu faịlụ ga-renamed dị ka ọ na-e ẹwụtde ke screenshot n'okpuru. Nke ma ọ bụrụ na nke a ga-kpebiri na nke a kwa na-ekwubi usoro.
Ọ bụ ezie na n'elu kwuru banyere ụzọ nke na-egosi captions ma ọ bụ ndepụta okwu bụkwa ukara na nwere ike rụrụ enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu onye ọrụ nwere ike ka na-eme n'aka na ukara ndu na e odude na URL http://windows.microsoft.com/ en-anyị / windows / show-captions-ndepụta okwu-media-ọkpụkpọ # 1TC = windows-7 na-ịchọgharịrị na needful a mere enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu. Ọ bụkwa na-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na na metụtara usoro na e kwuru na-emetụta windows 7 naanị Otú ọ dị usoro nwekwara ike-etinyere windows Vista na Windows 8 niile nsụgharị gụnyere ma maka otu ihe a ukara ndu nwere ike nwekwara-e weere dị ka vasatail onye na-eme n'aka na nke kacha mma e nyere na nke a enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu:
"M nwere ndepụta okwu agbanyụrịrị na WMP on Win7 na m nri pịrị na họrọ 'gbanyụọ ndepụta okwu' ma ha agaghị gbanyụọ. M na-agbalị ya na VLC na ọ na-arụ ọrụ ezi na-enweghị subs. Onye ọ bụla maara ihe mere nke a mere?"
N'ihi na ọ bụla onye ọrụ ndị doro nke nwere ike ịbụ a siri ike na onye na maka otu ihe ahụ ọ bụkwa mgbe ụfọdụ nnọọ na-akụda mmụọ na-ndepụta okwu mgbe ha na-adịghị mkpa mgbe niile. Iji mee ka n'aka na ihe bụ nsogbu kpebiri-esonụ bụ mkpebi na ike ga-etinyere jide n'aka na needful e mere enweghị ihe ọ bụla nke na nsogbu.
E nwere ngosi n'ime ọrụ mmanya metụtara ndepụta okwu nke video. Ọ ga-nri pịrị mere na ọ na nkwarụ idozi ihe iseokwu
Onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na ndepụta okwu na-adịghị hardcoded. Ọ nwere ike hụrụ site mmeghe na DVD faịlụ na e depụtaghachiri na nke a. Ọ bụ-ahụ kwuru na onye ọrụ kwesịrị ijide n'aka na a otu nkiri enweghị ihe ọ bụla sobtaitel faịlụ a na-adịghị eme na-egwuri na ọ bụrụ na nke a bụ ikpe ahụ ndepụta okwu na-hardcoded na-apụghị wepụrụ na niile.
> Resource> WMP> 4 Atụmatụ banyere ndepụta okwu na Windows Media Player